သင့်အတွက် မနက်ဖြန်: Linkတွေကို Drop Down Menu Listဖြင့် ဖော်ပြမယ်
<<<<<<<<<<<<<<Thank You For Visiting "Tomorrow For You">>>>>>>>>>>>>
Linkတွေကို Drop Down Menu Listဖြင့် ဖော်ပြမယ်
Author: Dead Soul | Filed Under: Blogging |
Linkတွေကို Drop Down Menu Listဖြင့် ဖော်ပြတဲနည်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ယခုတင်ပြမည့် Postသည် အင်မတန် အသုံးဝင်လှပါသည်။ Side Barတွေ Footer Barတွေမှာ တင်လိုက်တဲ့ Widget/Gedgetတွေဟာ နေရာယူမှု များပါတယ်။ Liksတွေကို Bloggerထဲမှာ ရှိတဲ့ Link Listထဲမှာ ထည့်လျင်လည်း နေရာယူမှုများပါတယ်။ ဒီလိုနေရာယူမှုများတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Main Pageဟာ အလွန်ရှည်လျားလှပါတယ်။ တချို့သောBloggerသမားများသည် Linkများစွာကို ဖော်ပြလိုကြတယ်။ ဒီလို များစွာသော Linkများကို Side Barမှာ ဖော်ပြလိုက်ပါက Main Pageမှာ ပြည်လျှံသွားမည်မှာ သေချာပါတယ်။ ကိုင်း Linkများကို Drop Down Menu Listထဲမှာ သွင်းကြရအောင်..
၁။ ဤ Link ကိုနှိပ်ပါ။
၂။ Default text (such as "Selectablog")အကွက်တွင် ခေါင်းစဉ်ရိုက်ထည့်ပါ။
၃။ Option Name: အကွက်တွင် Link၏အမည်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ဥပမာ - 3D Fish Screensaver
၄။ Option Link: အကွက်တွင် ထို 3D fish Screensaver၏ Linkကို ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ Pasteလုပ်ပါ။
၅။ Add Option Bottonကိုနှိပ်ပါ။ ဒါဆို Linkတစ်ခုထည့်ပြီးသွားပါပြီ။ မိမိ၌ရှိသော Linkမှန်သမျှကို ထည့်သွင်းပါ။
၆။ ထို့နောက် Looks great! Add this menu to my blog bottonကိုနှိပ်ပါ။
၇။ ထွက်လာသော Pageတွင် Titleကိုရိုက်ထည့်ပြီး Add Widgetကိုနှိပ်ပါ။ နေရာအထားအသို လုပ်နိုင်သည်။
ဒါဆို လှပတဲ့ Drop Down Menu Listကို မိမိကြိုက်သလို ထည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ။
Posts အသစ်များ Posts အဟောင်းများ
Read Posts Under My RSS Feed
(*_*) မြန်မာ ပြက္ခဒိန် (*_*)
(*_*) မြန်မာစံတော်ချိန် (*_*)
Computer Universities In MyanmarMinistry of Science and TechnologUniversity of Computer Studies, Yangon.University of Computer Studies, MandalayComputer University (Myitkyina)Computer University (Maubin)Computer University (Hpa-an)
ကရင် ဘလော်ကာများခွဲါကွ့င် (အင်းဟှးလင်ဖ၀်.)ခွဲါကွ့င် (KDA)စောဖိုးဇော်(အိုင်တီဂျာနယ်)အဲလာ (ကရင်လေး)ထောမဲပါ (ကော်သူးလေ)ဒေါနမြေမျိုးချစ်ကရင်စောလင်းနစ် (ခေါဟ်လံင်ဖါသိုင့်)စောကျော်ခွိရဲ့ နားခိုရာအဲခါန်.သငပထီးပကော်ဖားစည်သံသာမန်မဟုတ်သော အတွေးများဘာဘလုမူးOKRSO's Familyကရင်အမျိုးသား မိသဟာရအဖွဲ့ဖူ့တာမိက်ယံင့်၀၀်စ၀်အဲဆိုဒ်မန်းဧရာKaren Social Network နှလုံးသားကွန်ယက် ခေါဟ်လံင်ဖါ.သိုင့် အင်းဟှးလင်
လေ့လာသင့်သော အိမ်များသံလုံငယ်ကိုမြတ်ကိုဖြိုးရဲ့ Softwareမှတ်စုများမောင်ပညာOrgeကိုရန်အောင်Mystery ZillionKnowledge is FreeဧရာမြေIT Men BlogMyanmar Blogger Help DeskEngineer For Myanmarမောင်လှရဲ့ ဒိုင်ယာရီCMS Web DiaryMyanmar Internet JournalWeb Site TutorialsAnshuldudejaBlogger Stop
Downloads3D Fish Screensaver ACDSee 7AVG AntivirusE Soft Media Audio CaptureISO BurnerPaint Studio SoftwarePhotodex Slide Show SoftwareReFX Slayer Music CreaterRetouch SoftwareRocket Dock Software for DesktopTuneUp Utilities 2009 SoftwareZoner Photo Studio Softwareဓါတ်ပုံအလှဆင်ဖို့ Photocollageမြန်မာဖောင့် (Win Font)မြန်မာဖောင့်မျိုးစုံ
အမြတ်ဆုံးအလှူအရှင်ဆေကိန္ဒ-ဓမ္မဒူတကသစ်ဝိုင်ဝိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာအရှင်လောကနာထအရှင်ဥတ္တမသာရ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဆရာဦးမြင့်လွင်-သန့်တည်ပွားဖြူးဆရာတော် ဖားအောက်တောရဆရာတော် အရှင်ကောဝိဒ-မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်အဖြူရောင်မေတ္တာ
(*_*) 2009 July ဧည့်သည် (*_*)
(*_*) Drop your words below (*_*)
(*_*) အဖြူရောင်သံစဉ် ရေဒီယို (*_*)
(*_*) အကြံပေးစာများ ဖတ်ရန် (*_*)
Software (Virus) (1)
Windows and Software (12)
အထွေထွေ၊ ဆော့ဝဲရ် (1)
Slots Users Online
Sign In and Check Message